TAMAANDHADA "RED GUARD F1": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA IYO QOOB KA CIYAARKA - NOOCYO YAANYO
Maanta waxaa jira tiro badan oo kala duwan oo yaanyo ah.
Aad loo jecel yahay waa noocyada kala duwan ee "Guard Guard", taas oo looga doodi doono maqaalkan.
Tamaandhada "Guard Guard": Taariikhda ah ee taranta a hybrid
Meelo badan oo waqooyiga ah, halkaas oo xilliga xagaaga uu yahay mid gaaban, illaa dhowaan waxaa jiray dhibaatooyin soo kordhaya tamaandhaynta.
Geedaha aan loo habaynin qaboojinta ma qaadin xidid ama dhimasho ka dib muddo gaaban.
Si kastaba ha ahaatee, xal ayaa la helay. Sanadkii 2012, dadka reer Ruushka ah ee ka soo jeeda Ural ayaa ka tallaabsaday noocyada kala duwan ee isdhexgalka "Red Guard" iyadoo la adeegsanayo habka loo marayo, taas oo loogu talagalay beeritaanka gobollada aan lahayn qoraxda iyo kuleylka. Warshadu waxay ku leedahay magaceeda si aad u deg deg ah oo isku mid ah oo ah tiro badan oo ah miraha casaanka ah ee baadiyaha.
Tamaandhada "Guard Guard": noocyo dabeecad
Tamaandhada "Red Guard", sharraxaadda noocyada kala duwan ee la siin doono hoos, ayaa si weyn u soo jiitay dadka degaanka xagaaga iyo kuwa beeraha.
Warshadu waxay leedahay baadiyaha caddaalad ah, sarajooga ugu sarreeya ee ah 80 cm, laakiin tani kama horjoogsanayso inay si firfircoon u daaqdo. Miraha waxaa la dhigaa qaabka buraashka - hal burush ayaa leh 7-9 yaanyo.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in si haboon loo sameeyo samaynta baadiyaha - saddex salka. Haddii heerkulka sarreeya ee xagaaga uu yahay 4 dhir. Tani waxay si weyn u kordhin doontaa dhalidda geedka.
Tamaandhada "Red Guard f1" waxay si dhakhso ah u saartaa dalagga - waxaad tijaabin kartaa yaanyada ugu horreeya ee tobanka sanno ee saddexaad ee bisha Juun, bisha Sebtemberna miraha ugu dambeeya ayaa la goostay.
Kala duwanaansho waxaa loola jeedaa nooca weyn oo la kariyay, miisaanka hal miro waa 200-230 g. Tamaandho ayaa leh astaamaha soo socda:
midab cas oo casaan ah oo midhaha leh;
midho kasta wuxuu leeyahay ugu badnaan 6 qol oo qashin ah;
yaanyo waa weyn;
waxay ku kala duwan yihiin saxaro sonkor leh oo leh midab casaan ah, iyada oo aan lahayn xidid, waxaa jira qaabdhismeed adag.
Harvest waxaa lagu kaydin karaa guriga ilaa 1 bilood. Miraha waxay u dulqaadanayaan gaadiidka muddada dheer, ha is fiiqin.
Waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan badeecooyinka ka faa'iideysan kara daryeelka beerta: Fitodoktor, Ekosil, Nemabakt, Tanos, Oksihom, Aktofit, Ordan, Kinmiks, Kemira, .
Tamaandhada "Red Guard" waxay leedahay wax soo saar sare - laga bilaabo hal baadiyaha ah ilaa 4 kg oo yaanyo ah. Ka dib beeridda miraha, 50-70 maalmood waxaad ka geli kartaa goosashada ugu horeysay. Si loo kordhiyo dhalidda iyo dedejinta koritaanka yaanyo waxaa lagula talinayaa in lagu dhiso garoonnada ama hoyga filimada.
Ma taqaanaa? Dalaggii ugu badnaa ee laga soo qaatay hal kayn ayaa ahaa 9 kg. Miraha waxay ahaayeen kuwo ka yar celceliska, laakiin tirada yaanyada waxay dhaaftay dhalidda caadiga ah.
Muddo dheer, yaanyada looma lumiyo dhadhanka, sidaas darteed waxaa badanaa loo isticmaalaa karinta.
Tamaandho ka mid ah taranta Ural yihiin koray si fudud oo aan aad u u nugul microflora pathogenic. Cudurada fungal marar dhif ah ayay ku weeraraan warshad, sababtoo ah yaanyada waxay leeyihiin difaac xooggan iyaga. Cudurada caadiga ah sida fusarium iyo claasosporia sidoo kale maaha kuwo cabsi leh duurka.
Weerarada cayayaanka cayayaanka ah ma aha kuwo caadi ah. Tamaandhada waxay u adkeysanayaan nematodes galley. Khatarta ugu halista ah ee Gaaranka Casaanka ah waa balastarka cadcad. Joogitaanka dhibco huruud ah ee baadiyaha waxay muujinaysaa muuqaalka cayayaanka. Dhibco cad ayaa ka muuqda qaybta hoose ee saxanka caleen, taas oo sidoo kale muujinaysa weerarka cagaarka. Cuncunka ayaa si dhaqso ah u qallajiyey, curl iyo dhicid. Waxaa jira xaalad sii xumaanaysa sawir qaadista, taas oo horseedi karta kobcinta miraha.
Isla marka ugu horeysa ee calaamadaha ugu horreeya ee cayayaanka cayayaanka soo baxaan, waa lagama maarmaan in loola dagaallamo. Si arrintan loo sameeyo, caleemaha si tartiib ah ugu tirtir biyo leh saabuun. Tani waa habka dadweynaha ugu caansan ee burburinta cayayaanka. Haddii ay dhacdo dhaawacyo culus ee baadiyaha, waa lagama maarmaan in la isticmaalo daaweynta cayayaanka.
Waa muhiim! Balotelli cad cad ayaa si dhaqso ah loo isticmaalaa si loo daaweeyo dhirta isla diyaarinta. Sidaa darteed, si looga hortago dhacdooyinka cayayaanka, waxaa lagula talinayaa in lagu daaweeyo daawooyinka kala duwan.
Kormeerida heerkulka saxda ah, waxaad yareyn kartaa suurtagalnimada cayayaanka iyo horumarinta cudurrada baadiyaha.
Way adagtahay in la yareeyo caanimada "Red Guard", sababtoo ah tamaandhadu waxay soo uruurisay dib u eegista ugu wanaagsan, waxay heshay codsi ballaadhan.
Miraha waxay leeyihiin dhadhan wacan, oo u fiican diyaarinta saladhka. Qiyaasta wax soosaarka, noocyada kala duwan ayaa si firfircoon loogu isticmaalaa soo saaridda casiirka, ketchup, lecho, iyo banaanbaxyo kale oo lagu karsado.
Fiiri liiska noocyo kale oo yaanyo ah, sida Mikado Pink, Raspberry Giant, Katya, Maryina Roshcha, Gawaarida, Pertsevidny, iyo Prince Black.
Noocyada iyo tignoolajiyada beeraha ee yaanyada sii kordhaya "Red Guard"
Aad bay muhiim u tahay in la soo waco beerista yaanyo. Iyada oo daryeellada habboon, daawashada farsamooyinka agrotechnical, waxaad heli kartaa goosashada oo qani ah iyo dhadhan fiican leh.
Tamaandhada "Red Guard" ayaa marar dhif ah loo adeegsadaa dhul furan, soosaarka ugu wanaagsan ayaa la heli karaa marka lagu koray aqalka dhirta lagu koriyo ama koriyo. Iibso abuurka ayaa lagu taliyaa dukaamo khaas ah. Geedo koritaanka geedi socodka sida caadiga ah. Waxaa muhiim ah in aan seegin muddada abuurka ah - waa in lagu qabtaa badhtamaha March. Ka dib 40-50 maalmood, waxaad isticmaali kartaa sprouts beeritaanka dhirta lagu koriyo iyo lagu koriyo. Mudada celceliska nidaamkaan waa mid-Maajo.
Waxaa jira xeerar gaar ah oo ay tahay in la raaco marka la beero yaanyada:
halkii mitir labajibbaaran oo aqalka dhirta lagu koriyo ah waa in aanay noqon wax ka badan 3 duurka;
oo ka hooseysa hoyga filimka hal mitir oo laba jibbaaran ayaa la dhigi karaa 3-4 oo duurka ah;
si aad u hesho goosashada qani ku ah, waxaad u baahan tahay inaad baadho daaq saddex xagal ah;
in ay joogaan aqalka dhirta kulul, geedo aan la korin, iyo beerto waxaa loo fuliyaa si dhakhso ah ee dhulka u furan.
Ma taqaanaa? "Guardian Red" - mid ka mid ah noocyada kala duwan ee hybrid, ugu yartahay inuu weeraro cayayaanka iyo cudurada.
Qalabka agrotechnical sida dharka ugu sareeya looma adeegsan karo noocyada kala duwan. Warshadu waxay leedahay jawaab wanaagsan oo ku saabsan Bacriminta dabiiciga ah, sidaas darteed waxay noqon doontaa ku filan si ay u diyaariso goobo tayo sare leh ka hor beerashada. Xilliga dayrta, waxaa lagu talinayaa in ay dalbato Bacriminta si ciidda lagama maarmaanka u ah koritaanka iyo horumarinta caadiga ah ee yaanyo.
Muddeynta dhirta waa inay ku jirtaa bacarimiso keliya oo dabiici ah.
"Red Guard" waa mid si sahlan loo koray, warshadani waa mid aan la qabin oo daryeel ah. Uma baahnid inaad ka walwasho heerkulka ama qadarka iftiinka qorraxda - goosashada mar walba waxay noqon doontaa mid istaahil ah.
Tamaandhada ma u baahan tahay garter ah, sababtoo ah caleemaha ma weyn. Sidoo kale, ma ay u leexinayaan darnaanta midhaha.
Kala duwanaanshaha noocyada kala duwan ee yaanyada ee tamaandhada waa xal fiican oo loogu talagalay gobollada ay haysato la'aanta qoraxda iyo muddooyinka diiran. Natiijadu waxay ku qancinaysaa qof walba - daryeel fudud, goosasho weyn iyo dhadhan wanaagsan!